Nwoke Uwe, jaket padded, Uwe nwoke - Hengqianxiang
Otu na ọrụ
Ndị nwoke uwe
Uwe a kpara akpa
Ihe mkpuchi jaket
Uwe ndị nwanyị
Usesmụ nwanyị nwanyị
Nkasi obi, ịrụ ọrụ dị elu, akwụkwọ ọhụrụ
Super Ọhụrụ Winter Men n'uwe Formal eyi Kedo akwa ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Na-ejuputa 90% ọbọgwụ, 10% nku Size Ọ bụla nha dị Agba Agba ọ bụla dị adị Ndị ọzọ Real raccoon fur Product iwebata Nke a na ndị ikom oyi padded jaket bụ ibu ọkụ. Designdị ihe mkpuchi agba dị iche na-eme ka jaket ahụ dị obere. Nnukwu ajị anụ ọhịa raccoon dị ukwuu na-ejide ikuku. Njirimara ngwaahịa Super na-ekpo ọkụ, ụdị dị mma.
Factory N'ogbe Men n'uwe Fashional Clothes ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Na-ejuputa 90% ọbọgwụ ala, 10% nku Size Ọ bụla nha dị agba Agba ọ bụla dị Ngwaahịa Mbido Ngwa uwe dị mkpụmkpụ bụ ọkụ ọkụ, dị nro ma na-ekpo ọkụ. ewu ewu ewu atụrụ ewu ewu. Ngwaahịa na-egosipụta ịdị arọ dị mfe, nke ọma, nkecha.
Factory Manufacturer Men n'uwe Casual eyi eyi Sh ...
Shell 98% cotton, 2% polyester Lining 100% polyester, Imitomi ụmụ atụrụ ajị anụ Na-ejuputa 100% polyester Size Ọ bụla nha dị Agba Agba agba ọ bụla dị Ngwaahịa Ngosiputa Ngwa mma dị mma na akwa na-eme ka jaket ahụ dị elu. Jaketị na-abata na mkpanaka dị mma nke dabara ahụ gị n'ụzọ zuru oke, ma mee ka ị dị ka onye mara mma ma mara mma. 50% ajị anụ na-eme ka ị na-ekpo ọkụ n'oge oyi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Njirimara ngwaahịa Nkecha, nke na-ekpo ọkụ, nke ikuku, Ọpụrụiche dị iche iche na ihe ọkụ.
Factory Manufacturer Formal Short Woolen Men mkpuchi
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Na-ejuputa 100% polyester Size Nke ọ bụla nwere agba Agba agba ọ bụla dị Ngwaahịa iwebata Ngwaahịa dị mma nke ajị anụ na-eme ka jaket dị elu. Jaketị na-abata na mkpanaka dị mma nke dabara ahụ gị n'ụzọ zuru oke, ma mee ka ị dị ka onye mara mma ma mara mma. 50% ajị anụ na-eme ka ị na-ekpo ọkụ n'oge oyi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Atụmatụ ngwaahịa Ezi mbipute, ikuku ikuku, ọkụ.
Appmụ nwoke yi uwe na-eyi ogologo jaket Jacket
Shell 100% owu Lining 100% polyester Size Nke ọ bụla dị ya Agba agba ọ bụla dị Ngwaahịa iwebata Ngwaahịa abụọ, decochọ mma. Jacketdị dị mkpụmkpụ na nke ogologo na-eme ka ị dị ka graces. Atụmatụ ngwaahịa Ezi mbipute, ikuku ikuku, ọkụ.
100% Polyester Windproof Omenala Short Bombe ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Size Ọ bụla nha dị Agba Akara ọ bụla dị na ngwaahịa Mbupụta ngwaahịa Ekike a na-abịa na paịpụ ojii, ma gosipụta ọhụụ na ọnọdụ nke oge a. A na-etinye akpa a na-etinye akpa na ogwe aka pụrụ iche, ma na-agbakwunye funk na uwe ndị ọzọ dị mfe. Ejiri akwa mmiri na akwa mmiri na-enweghị mmiri .Ọ dị mma maka uwe na-adịghị n'èzí na nke nkịtị. Ngwaahịa na-ekpuchi mmiri na ikuku mmiri, akọrọ ngwa ngwa.
Hot Sale Winter Women Uwe Fashional Down C ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Na-ejuputa 90% ọbọgwụ ala, 10% nku Size Ọ bụla size dị Agba ọ bụla na agba dị Ndị ọzọ Product iwebata The onwunwu pink Down Jacket e mere n'ụzọ zuru oke iji lụsoo oké oyi na-enweghị na-erikpu ndị wears. Ejiri teknụzụ jikọtara jaket ahụ na teknụzụ dabara nke ọma na mgbochi mmiri na oke iguzogide ọnwụ nke ahụ. Ihe nke jaketị bụ nke a na-agbatị ma na-agbanwe agbanwe tupu ọ dị mfe ...
Sport Outwear jaket N'ogbe ahaziri wome ...
Nkwalite ngwaahịa A jaket egwuregwu a dị ezigbo mma maka mpụga. A na-egbochi akwa mmiri na ngwa ngwa. Mkpọchi mkpọ bụ waterproof. Enweghị nsogbu na mmiri ozuzo n'èzí. Njirimara ngwaahịa 1. Na-adịgide adịgide ma dị mma. 2. Na nkasi obi. 3. Ihe pụrụ iche pụrụ iche na ihe dị ọkụ. 4, Ọ dị mma maka mmemme a na-eme n’èzí na oge opupu ihe ubi na udu mmiri. Ọ bụrụ na ị hụrụ agba n'anya, mgbe ahụ jaket a zuru oke maka gị. Ihe j ...
Mpi mmepụta ihe mpi. Anyị na-achịkwa akụkụ ọ bụla iji nye gị ọnụahịa kacha mma.
Anyị nwere ike ịmepụta obere iwu na iwu agwakọtara.
Mbupu ngwa ngwa
Mgbe ị kwadochara nlele ahụ na usoro ahụ, anyị nwere ike ịnapụta ngwongwo ahụ na ụbọchị 30.
Ọrụ nhazi nke miri emi
Anyị nwere ike inyere gị aka ịzụlite ụdị ọhụụ gị dịka echiche gị ma ọ bụ nka.
Eziokwu, ibu ọrụ, mmeri
Kedu ihe ga-abụ ọnọdụ nke textile na garme ...
Texzụ ahịa akwa na akwa nke China bụ ihe a na-ahụkarị na ọkara mbụ nke afọ a n'ihi mgbasa zuru ụwa ọnụ nke COVID-19.Na abata na Mee na June, ụfọdụ data enwetala. Ọnọdụ zuru ezu na ...
Ndị ọrụ nri abalị tupu 2020 Spring Festival, s ...
Na njedebe nke 2019, anyị ga-achikota ọrụ nke afọ gara aga, na-ekwusi ike pụrụ iche na nsogbu na ọrụ, ma mee ka onye ọ bụla cheta ịrụ ọrụ ka mma na Afọ Ọhụrụ.
Ime Anwansi na February 2020
Anyị ga-aga anwansi gosi na February 2020, Nọrọ na-ege ntị maka akụkọ kachasị ọhụrụ anyị.
Ogo Nke mbụ, Onye Ahịa Kasịnụ
Adreesị:RM4A22, Building B, Ritan International Trade Center, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Ekwentị mkpanaka: 0086-18515900837